မေးထားသူများအတွက်...(7.10.2015) - မောငျပေါကျ ( Maung Pauk )
Home Mobile Tutorials မေးထားသူများအတွက်...(7.10.2015)
Thiha Htike at 7:17:00 AM Mobile Tutorials,
မေးမြန်းထားသောသူတွေအတွက်ပါ ကျွန်တော်က မေးမြန်းလို့ရပါတယ်ဆိုလို့ အထင်မကြီးပါနဲ့ကျွန်တော်ဘာမှမသိပါဘူး ဒါလည်း မေးတဲ့သူတွေအသိဆုံးပါ အားလုံးကကျွန်တော့်ဆရာတွေပါ ကျွန်တော်က နွားခြေရာခွက်လေးမှ ပျော်နေတဲ့ဖားလေးပါ...
ဖွင့်မရတာ သာမန်အားဖြင့်ပဲ ထင်လိုက သာမန်နည်းလေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ် နည်းလမ်းနှစ်ခုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်...
GSM/WCDMA သမားတွေအတွက် ….
Name ------------------ Mpt
Apn ------------------ mptnet
Authentication Type ----------------- PAP or CHAP
CDMA (0973…….) သမားများအတွက်
Name ------------------ ကြိုက်ရာပေးပါ
APN ------------------ #777
User Name ------------------ user@c800.m
အဲ့ဒီမှာ ကျွန်တော် တစ်ခုပြောချင်တာလေးတော့
@c800.m ကအသေရေးရမှာဖြစ်ပြီး ရှေ့က user
Password ---------------- ကြိုက်ရာ
Authentication type -------- PAP or CHAP
Prompt Password -------- #777
MEC ( C 800) သမားများအတွက်
User Name ------------------ card
Password ---------------- card
Telenor & Ooredoo သမားများအတွက်
Setting မရပါက ထည့်နည်း
Name ---------------- ကြိုက်ရာ
APN ---------------- internet
APN မှာ ကြိုက်တာထည့်လို့ရပေမယ့် internet
ထည့်တာကတော့ သူတို့ တရားဝင်အသိအမှတ်ပြုထားတဲ့
Setting မို့လို့ လိုင်းပိုကောင်းမှာပါ…..
Authentication Type ----- PAP or CHAP
ပြီးရင် Menu နှိပ်ပြီး Save လိုက်ပါ...
အောက်က one click နဲ့ setting သွင်းပေးမယ့် Apk ပါ
internet Auto ပွင့်နေသော သူများအတွက်...
SAMSUNG KOREA Model တွေမှာ Internet မဖွင့်ပဲ သူအလိုလိုပွင့်တာတွေကိုရှင်းတဲ့နည်းလေးပါ…တချို့Modelတွေက Power ပိတ်လိုက်တာတို့ Restart ကျသွားတဲ့အချိန်တွေမှာ Power ပြန်တက်လာရင် Internet က သူ့အလိုလိုပွင့်နေတက်ပါတယ် တချို့Model တွေကျတော့ ဒီအတိုင်းကိုပွင့်နေတက်တာပါ…လုပ်နည်းကမခက်ပါဘူးလွယ်ပါတယ်…
Password တောင်းပါက 774632 (သို့) 996412 (သို့) 110821 ဟုရိုက်ထည့်လိုက်ပါက..
၄င်း Menu ထဲမှ Network Setting ကိုဝင်ပါ Network mode မှတဆင့် GSM 900 ကိုရွေးပြီး Home Key နဲ့ပြန်ထွက်လိုက်ရင် အားလုံးအဆင်ပြေသွားပါပြီ…..
အခြား branded တွေကတော့ သိပ်မဖြစ်ကြလို့မတင်ပေးလိုက်တာပါ မေးတဲ့သူကလည်းဒါပဲမေးထားလို့နော်...ါ်ီ
Telenor အသုံးပြုသူတွေတွက် Gmail မလိုဘဲ Sim Card ဖြင့် facebook လျောက်နိုင်မည့် နည်းလမ်းလေးဖြစ်ပါသည်"
ဒါက Email သုံးချင်သောသူများအတွက်ပါ
ဒါက ဖတ်လို့မရရင် ဒါကိုထပ်ဒေါင်းပါ
Mermory Earror ဖြစ်နေသူများအတွက်
အမှန်တကယ်ကို sd ထဲကိုရွှေ့လို့ရပါတယ်ဗျ.....system ဖိုင်တွေကိုတော့ ရွှေ့လို့မရပါခင်ဗျာ
ဒီ apk လေးက ဘာကောင်းလဲဆိုရင် sd ထဲသို့ move to sd ဖြင့် ရွှေ့မရသော apk နဲ့ game တွေကို
အခုတင်ပေးတဲ့ ကောင်လေးက အလွယ်တကူနဲ့ရွှေ့ပေးပါလိမ့်မယ်ဗျ......sd ကိုရွှေ့တဲ့ apk တွေအများကြီးရှိပါတယ်ဗျ....
ဒီ apk လေးကိုသုံးဖို့အတွက်ကတော့ မိမိဖုန်းက root ထားဖို့လိုပါတယ်ဗျ...အချို့ apk နဲ့ game တွေဟာ dafult function မှာ move to SD card ထဲကို ရွှေ့မရတာလေးတွေရှိပါတယ်ဗျ....
အဲဒီလို ရွှေ့မရတဲ့ဟာလေးတွေကို ဒီ apk နဲ့အလွယ်တကူရွှေ့နိုင်ပါတယ်ဗျ.....apk ကိုဖွင့်..ရွှေ့ချင်တဲ့ apk or game ကိုနှိပ် ....move to SD card >> Ok.... [တစ်ခုတော့ရှိတယ်ဗျ.....widget ထုတ်လို့ရတဲ့ apk တွေကိုရွှေ့လိုက်ရင်တော့ widget ထုတ်လို့မရပါဘူးခင်ဗျာ.....]
အောက်မှာ screenshot ရိုက်ထားတဲ့ပုံလေးက dafult မှာ ရွှေ့မရတဲ့ live wallpaper လေးကို ရွှေ့ထားတဲ့ပုံလေးပါခင်ဗျာ....
android version request ကတော့ version 1.6 နဲ့အထက်ပါခင်ဗျာ....
ကျွန်တော်အခုတင်ပေးထားက update လေးပါ.........
error မရှိပါ....စိတ်ချလက်ချသုံးကြည့်ပါဗျ...sd ထဲကို အမှတ်တကယ်ကိုရွှေ့လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာ....
Google Play Store မှာလဲလေ့လာနိုင်ပါတယ်ဗျ....
screenshot-.JPG (39.55 KB, Downloads: 1)
screenshot.JPG (57.76 KB, Downloads: 0)
မြန်မာ Facebook လိုချင်သူများအတွက်ပါ
ယခုပိုစ့်နှင့် ပတ်သတ်တဲ့သူများအားလုံးကို Credit ပေးပါတယ်ခင်ဗျာ...